किन रोज्छन सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याका अभियुक्त्तहरु झुम्का कारागार ? - Merodesh.news
किन रोज्छन सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याका अभियुक्त्तहरु झुम्का कारागार ?
१७ भदौ २०७५
विराटनगर, १७ भदौ । संबिधानको समानताको हक अनुसार फौजदारी अभियोग लागेका सबै अभियुक्त्तरु समान हुन्छन । तर जिल्ला अदालत मोरंगले सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या आरोपमा पुर्पक्षकालागि मोरंग कारागार पठाएका अभियुक्त्तहरुमा यो नियम लागू भएको छैन । जिल्लाले थुनामा पठाएका सबै अभियुक्त्तहरु झुम्का कारागारमा जान रुचाउने गरेका छन । उनिहरुसबैको रोजाई झुम्का कारागार हुनेगरेको छ ।
जिल्ला अदालत मोरंगले पुर्पक्षकालागि विराटनगरमा रहेको मोरंग जिल्ला कारागार पठाउन आदेश गरेपनि सबै अभियुक्त्तहरु निबेदन गरेर एक दुई दिन भित्रै झुम्का कारागार जाने गरेका छन ।
सुन र सनम हत्या मुद्दामा हालसम्म ३९ जनालाई मोरंग अदालतले थुनामा पठाईसकेको छ । जसमध्ये मुख्य योजनाकार भनिएका चुडामणी उप्रेती (गोरे) काठमाण्डौ जेलमा सरुवा गरिएका छन । पछिल्लो पटक १३ भदौमा कारागार पठाएका दोस्रो चरणका पाँच अभियुक्त्तहरु बाहेक सबै सुनसरीको झुम्का स्थित क्षेत्रिय कारागारमा सरुवा मागेर गएका छन ।
गोरे मात्र काठमाण्डौमा अन्य सबै झुम्का कारागारमा बन्दि
मोरङ अदालतका न्यायधीश नारायणप्रसाद शर्माको ईजलासले पहिलो पटक ८ जेठ २०७५मा ३० अभियुक्तमध्ये २८ जनालाई र त्यसपछि बिभिन्न मितिमा ६ जना र १३ भदौमा पाँच गरि जम्मा ३९ जनालाई थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्नकालागि मोरंग कारागार पठाउन आदेश गरेको थियो । तर अदालतले मोरंग कारागार पठाएकाहरु मध्ये पछिल्ला पाँच जना अभियुक्त्त बाहेक कोही पनि मोरंग कारागारमा बसेका छैनन । उनिहरु सबैले असुरक्षा , र स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै झुम्का कारागार सरुवा गराएका छन । अदालतले कारागारमा पठाएका अभियुक्त्त मध्ये गोरेले मात्रै आफु झुम्का कारागार नजाने मोरंग कारागार नै बस्ने माग गरेका थिए । झुम्का कारागारमा गोरेले आफनै समुहबाट आफुलाई सुरक्षा थ्रेट महशुस गरेका थिए । पछि कारागार प्रशासनले गोरेलाई काठमाण्डौ सरुवा गरेको थियो । काठमाण्डौमा पनि गोरेले आफुलाई सेनाको सुरक्षा दिन माग गरिरहेका छन ।
पाँच सुन कारोवारीको पनि झुम्का नै जाने चाहना
पछिल्लो पटक १३ भदौमा मोरंग अदालतले थुनामा राख्न मोरंग कारागार पठाएका पाँच अभियुक्त्तहरुले पनि आफुहरुलाई झुम्का कारागार सरुवा गरिदिन निबेदन गरेका छन । झुम्का कागार जान चाहने थप अभियुक्त्तहरुमा सुन कारोवारीहरु काठमाण्डौका ५० वर्षिय बिमल पोद्दार, सोही ठाउँका ४० वर्षिय संजय खेतान भन्ने प्रभात अग्रवाल, विरगंज ७ का ५९ वर्षिय आर. डि. राजु भन्ने राजकुमार दारुका, काठमाण्डौका ४८ वर्षिय डब्बु भन्ने ईम्तियाज उद्दिन, ४३ वर्षिय सलमान खान भन्ने शैयद अकबर साह छन ।
को को छन झुम्का कारागारमा बन्दि
हाल सुन सनम मुद्दाका अभियुक्त्तहरु पाँच बाहेक हेमन्त गौतम र राजन थापा, महाबिरप्रसाद गोल्यान अनि टेकराज मल्ल पुण्यप्रसाद लामा, सम्बिरप्रसाद तोलाङगे र राजनकुमार, पुर्व डिआइजी गोबिन्द निरौला निलम्बित एसएसपी श्यामकुमार खत्री एसपी बिकासराज खनाल दिवेश लोहनी डिएपीहरु सञ्जयबहादुर राउत ,प्रजितकेसी सई बालकृष्ण सञ्जेल, एल.बी भन्ने लालबहादुर मगर, भूजुङ्ग गुरुङ्ग, राजेन्द्र कुमार शाक्य, बिजेन्द्रमान श्रेष्ठ, राजु महर्जन, कपिलराज पुरी,बालकृष्ण श्रेष्ठ, गोपाल कुमार श्रेष्ठ, दोराम खत्री, माधब भन्ने मदन प्रसाद घिमिरे, अम्बरमान डंगोल, मदन सिलवाल लगायत झुम्का कारागारमै बन्दि छन ।
किन रोज्छन सुन र शनम हत्या मुद्दाका अभियुक्त्तहरु झुम्का कारागार ?
सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या आरोपमा पुर्पक्षकालागि थुनामा गएकाहरुले मोरंग कारागार बस्न नचाहने कारण असुरक्षालाई नै मुख्य कारण बनाएका छन । यसैले सबैले साँधुरो मोरग कारागार भन्दा फराकिलो र आधुनिक सुबिधा भएको झुम्का कारागारलाई नै रोज्ने गरेका छन । र , सुन तस्करी मुद्दाका सबैको निबेदनलाई कारागार बिभागले स्विकार गरेर झुम्का सरुवा गर्न अनुमति दिइरहेको छ ।
मोरंग कारागारको क्षमता जम्मा २ सय ५० कैदीबन्दिको छ । तर हाल त्यहाँ ६ सय बढी कैदीबन्दि छन । झुम्का कारागारको क्षमता १६ सय हो । झुम्कामा हालसम्म १५ सय ७५ जना कैदीबन्दि पुगिसेकेका छन । साढे ३ बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको झुम्का कारागार फराकिलो र सफा अनि राज्यले निषेध गरेका बाहेक सबै सुबिधा भएकोले गर्दा पहुँचबाला कैदीबन्दिहरुको रोजाई हुने गरेको छ । यहाँ पुस्तकायल , खेलखेल्ने मैदान, म्युजिक सुन्ने सिक्नेदेखी अन्य बिभिन्न सुबिधाहरु उपलव्ध छन ।
मोरंग कारागार बोर्डरको नजिक रहेको, अति नै साँधुरो र गर्मी ठाउँमा भएकोले पनि पहुँचबाला कैदीबन्दि बस्न रुचाउँदैनन । कैदीबन्दिहरुको सुरक्षा, स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै कारागार व्यवस्थापन बिभागले अनुरोधपत्र स्विकृत गरेपछि मात्र अन्य जेलमा सरुवा हुने गर्दछन ।
तर सुन मुद्दाका सबै बन्दिहरुलाई सहज रुपमा झुम्का कारागार सरुवा गरेपछि मोरंग कारागारमा रहेका कैदी बन्दिहरुले आफुहरुलाई मात्र साधुरो ठाउँमा राखेर बिभेद भएको गुनासो पनि गर्न थालेका छन ।